Farmaajo oo dalbaday in lala heshiisiiyo Rooble | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo dalbaday in lala heshiisiiyo Rooble
Ujeedka Kooxda Farmaajo, ayaa ah in ay Fahad Yaasiin ka badbaadiyaan in la hor-geeyo, Maxakamadda, isla-markaana kiiska Ikraan lagu dhameeyo xal-mastuur, iyadoo si hoose loola xaalayo qoyska ay gabadhu ka maqan tahay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullahi Farmaajo, oo xaqiiqsaday in waayihiisii siyaasadda ee indha-sarcaadka ku dhisnaa soo idlaadeen, ayaa koox u dhow xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha ka codsaday in la heshiisiiyo Maxamed Xuseen Rooble.
Farmaajo, ayaa Guddoomiye Ku-xigeenka 1aad, ee Baarlamaankii 10aad, Cabdiweli Sheekh Muudey iyo xubno kale, ka codsaday in ay dhexdhexaadiyaan labada xaafiis, waxayna horraanba bilaabeen xal u helidda xasaradda ka dhalatay kiiska eedeysane Fahad Yaasiin.
Sida ay xaqiijinayaan ilo xog-ogaal ah, Farmaajo, ayaa go’aansaday inuu ka tanaasulo amarkii shaqeyn waayay ee ahaa inuu Fahad sii wato shaqada Agaasimaha NISA, hayeeshee, wuxuu doonayaa in la baabi'iyo kiiska maxkamadeynta Fahad.
Farmaajo, ayaa mucaaradad xooggan kala kulmay bulshada Soomaaliyeed, kadib markii uu ka hor yimid tallaabada uu Ra’iisul Wasaare Rooble, ku raadinayo in caddaalad loo helo Ikraan Tahliil oo ku maqan gacanta Nabad-sugidda.
Ujeedka Kooxda Farmaajo, ayaa ah in ay Fahad Yaasiin ka badbaadiyaan in la hor-geeyo Maxkamadda, isla-markaana kiiska Ikraan lagu dhameeyo xal-mastuur, iyadoo si hoose loola xaalayo qoyska ay gabadhu ka maqan tahay.